Knife block ine yakakwana zvinhu: abs plastiki, thermoplastic uye chikafu giredhi zvinhu. Simba rekushandisa ine 36W 0.38A, kurongedza dhayamita ndeye 290 * 227 * 340mm, net uremu ndeye 3.1kg. Kuchengeta kuri nyore - Kuchenesa nyore nemvura yepombi nemaoko. Iyi banga rinosimudza ndiyo nzira yakanakisa yekurodza mapanga ako ekicheni uye kuchengetedza nguva yako. Yese-mu-Imwe Seti, 5 chidimbu chebanga maseti uye zvidimbu zvinogona kuiswa utachiona mune imwe nguva
2-in-1 mhepo yekuchenesa uye fan inotonhodza nzvimbo yako uchisefa 99.79% yeanosijeni uye zvinosvibisa. bladeless dhizaini iri nyore kuchenesa uye kuchengeteka kune vana.Cool iwe pachako uine rugare rwepfungwa nemhepo yayo firita. Bladless fan ine yekuchenesa & sterilization basa, furidza uye kusefa kure nehuzi neiyi fan fan.
2-in-1 mhepo yekuchenesa feni inotonhodza nzvimbo yako uchisefa 99.79% yezvinhu zvinogutsa uye zvinosvibisa. Dhizaina dhizaini iri nyore kuchenesa uye yakachengeteka kune vana. Pasina isina kunetsa grille kana mashizha, zviri nyore kwazvo kupukuta yakachena mashandisirwo emunhu mune yekumba uye hofisi nzvimbo yekuvandudza mhando yemweya. Inobatsira vanosvuta kudzora utachiona mukati memhepo. Inogona kubatsira kuvandudza zviratidzo zveasthma uye mukume allergies. Yakakura kumakamuri evana, dzimba dzekugara nemahofisi madiki anosvika makumi matatu emamirimita.
Mini inotakurika mweya inotonhorera dhizaini nekaviri-fan yemhepo yakasimba. Iyo ine matatu-nhanho mweya inopa. Super inotonhorera uye inozorodza nechando uye nemvura, isina mhute isina humidifying basa, ichiburitsa isina ioni, yakaparadzanisa tangi remvura, dzivisa kuburitsa mvura. Inochengetedza ganda rako hunyoro uye wozofuridza mweya unotonhorera kuti ugare kure nemhepo yakaoma uye kunakirwa neinotonhora uye nyowani zhizha.